Xutiyiinta oo Ka Baxaya Xudeyda – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Xutiyiinta oo Ka Baxaya Xudeyda
Tallaabadaan ayaa loo arkaa midlooga dhabeynayo heshiiskii ay Qaramada Midoobay ay kala dhex-dhigtay Xuutiyiinta iyo Isbaheysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ee isku haya dagaalka Yemen.
Xudeyda ayaa ah ah halka ay badeecooyinka dibadda iyo gargaarka bani’aadannimo ka galaan Yemen, waxaana ay muhiim u tahay nolosha malaayiin reer Yemen oo hadda qarka u saaran macluul aad u daran.
Madaxa guddiga kacaanka ururka Xuutiyiinta Yemen Mohammed al-Huthi, ayaa sheegay in dagaalyahannadu ay billaabi doonaan in ay ka baxaan magaalada maanta tobanka barqanimo xilliga Yemen.
Wuxuu sheegay in mucaaradka ay si hal dhinac ah uga baxayaan Xudeyda, kaddib marki ay ciidamada dowladda ee taageerada ka helaya Sacuudiga ay marar badan dib u dhigeen ka bixidda magaalada, taasoo qeyb ka aheyd haeshiiskii dalka Sweden.
Qaramada Midoobay oo Jimcihi sii sheegtay ka bixista Xudeyda ee ciidamada mucaaradka, ayaa sheegtay in Xuutiyiinta ay dhameysti doonaan ka bixisita Xudeyda iyo labada dekedood oo u dhaw, maalinta Talaadada ah.
Previous articleRW ku-xigeenka Dalka oo furay imtixaanka Shahaadiga ah
Next articleTaliyaha Ciidanka Xoogga oo Kulan la qaatay Ciyaartooyda Naadiga Horseed +Sawirro
Intooda badan waa caruur… 800 Xuutiyiin ah ayaa lagu dilay Yemen...